FLAC waa codec maqal ah taas oo ka kooban files audio muunad in ay yihiin ciriiri isticmaalaya Deji geynta FLAC ah. FLAC ma aha qaab file caan ah sidaas darteed waxaa laga yaabaa in xaalad ay dadka isticmaala kuma xitaa ka war jiritaanka sida nooca file ah. Nasiib darro, inta badan ciyaartoyda saxaafada ma taageeri qaab file iyo aad aakhirka yaaban sida ay dhab ahaantii ciyaari file this ee nidaamka doonaa! Haddii aad qabto xaalad la mid ah, mid ka mid ah xalka ugu habboon ee aad heli karto waayo, markaas waa in loogu badalo file FLAC soo galeen qaar ka mid ah qaab kale oo file. Ka dib marka aad badaley file FLAC ah, hadda waxa aad ka ciyaari kartaa in ciyaaryahan kasta warbaahinta!
Qeybta 1: FLAC Best in MP4 Video Converter
Qeybta 2: FLAC Free in Converter MP4
Qeybta 3: Aqoonta Extended ee FLAC
Sababtoo ah FLAC ma aha qaab file caan ah, waxa aan la taageeray by inta badan ciyaartoyda saxaafada taas oo ah sababta aad u baahan tahay si ay u badalo galay qaar ka mid ah qaab kale oo file. MP4 waa qaab file aadka loo jecel yahay iyo waxa taageera inta badan ciyaartoyda warbaahinta iyo xitaa mobile qalabka. Tani waa sababta dadka inta badan loogu badalo file FLAC si ay u file MP4. Waxaa jira tiro ka mid ah convertors qaab sida laga helaa suuqa laakiin haddii aad raadinayso video ah Converter ugu fiican, ka dibna waxba garaaca Wondershare Video Converter Ultimate ah! Wondershare Video Converter Ultimate waa xirmo software dhamaystiran maamulka video kuu ogolaanaya inaad sameyso waxyaabo badan.
Qaar ka mid ah qaababka ugu muhiimsan oo ay taageerayaan Wondershare Video Converter Ultimate ka mid ah:
Wondershare Video Converter Ultimate Isticmaali karaan macaamiisha si uu u sameeyo beddelaad galay tiro ka mid ah qaabab file. Software wuxuu taageeraa in ka badan 150 qaabab file u beddelaad.
Marka la barbar dhigo si dhaqso leh ee diinta, Wondershare Video Converter Ultimate waa ku dhowaad 30 jeer ka dhakhsi badan tartanka. Oo weliba software ayaa sidoo kale ku faantaa faylasha diinta ka mid qaab si kale aan wax u dhimin ay tayo leh.
Marka aad soo dajiyo Wondershare Video Converter Ultimate, waxaad samayn kartaa noocyo kala duwan oo wax la isticmaalayo software sida sixiddiisa video ah. Waa dhamaystiran maamulka video software.
Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa adiga oo isticmaalaya jecel videos Wondershare Video Converter Ultimate. An search engine dhafan u raadinaya video aad jeceshahay online waxaa kaloo la siiyaa. Oo weliba waxaad ka raadin kartaa video aad jeceshahay iyada oo browser ka dibna ku dhaji URL ay u bilaabaan dajinta la Wondershare Video Converter Ultimate.
Wondershare Video Converter Ultimate Siisaa macaamiisha ay la muujinta ah ee dajinta Dufcaddii taas oo macnaheedu yahay in aad kala soo bixi kartaa dhowr ah oo videos waqti isku mid ah iyadoo heerka la mid ah.
Haddii aad rabto in aad si loogu badalo file FLAC ah in file MP4 isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate, ka dibna raac tallaabooyinka sida hoos ku qoran:
Tallaabada 1 shuban file FLAC ee Wondershare Video Converter Ultimate
Marka aad bilaabay Wondershare Video Converter Ultimate ah, tallaabada xigta waa in ay ku shuban file FLAC in loo baahan yahay in la badaley ah. Waxaad ku shuban kartaa files ee Wondershare Video Converter Ultimate midkood jiidayeen faylka galay interface ama xulashada faylka gacanta iyada oo badhanka 'darto files'.
Marka file FLAC waxaa ku raran yihiin in Wondershare Video Converter Ultimate ah, waa in aad hadda doorato qaabka wax soo saarka ah ee faylka ku keentay. Waxaannu dooni inaan badalo file ka FLAC in MP4 si qaab wax soo saarka noqon doonaa MP4. Waxaad dooran kartaa qaabka wax soo saarka ka ah 'qaab saarka' tab dhinaca midigta. Waxaa sidoo kale jira tiro ka mid ah qaabab kale file la heli karo iyo mid kasta oo ka mid ah waxaad dooran kartaa sida ay u baahan tahay.
Tani waa tallaabo gebi ahaanba optional oo la saaray karo haddii aan loo baahnayn. Tafatirka aad file in la sameeyo nooc kasta oo kaabidda in si buuxda waxaa taageera Wondershare Video Converter Ultimate. Si kastaba ha ahaatee waxaad ka boodi kartaa tallaabada haddii aadan rabin in la sameeyo wax isbedel ah file asalka.
Tallaabada 4 Beddelaan file FLAC si aad u qaab MP4
Marka aad samaysay oo dhan tallaabooyinka kor ku xusan, waxaad bilaabi kartaa habka diinta dhabta ah. Si loogu badalo aad file ka format file FLAC in qaab file MP4, guji kaliya badhanka 'diinta' iyo Wondershare Video Converter Ultimate bilaabi doonaa habka! Inkastoo software waa arrin degdeg ah oo ay xawaaraha diinta laakiin waxay qaadan kartaa xoogaa tallaabooyin ah ee hawlaha qaab beddelidda in ay buuxiso ku xidhan xajmiga faylka si aanay u soo noqon.
Haddii aad raadinayso FLAC si xor ah u Converter MP4, markaas Wondershare Video Converter Free waa doorashada ugu fiican aad u! Wondershare Video Converter Free Waxay bixisaa qaar ka mid ah faa'iidooyinka in dadka isticmaala ay ka mid yihiin dajinta iyo sixiddiisa videos ah.
Wondershare Video Converter Free Bixisaa dhammaan hawlaha in dadka isticmaala ay lacag la'aan ah oo ah qiimaha.
Wondershare Video Converter Free U ogolaanaya ma aha oo kaliya dadka isticmaala ay si loogu badalo videos laakiin waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa videos, oo waxay u saxaa.
Tayada sababtay of Wondershare Video Converter Free ma u fiican yahay sida Wondershare Video Converter Ultimate.
1. Waa maxay FLAC?
FLAC waxay u taagan tahay Free sameecadda codec Audio oo ugu horayn loo isticmaalo compressing size oo ka mid ah files audio. Iyadoo sarawiisha faylasha hoos u yaabaa in size file kaliya by 10-20%, FLAC hoos size file by sida ugu badan 50-60% ka. Waxaad si fudud u cadaadin karto iyo decompress file maqal ah oo ay ku haynta tayada la mid ah. Oo ay taageerayaan Xiph.Org Foundation, codec file FLAC ee waa nooca qaab codec furan. Xoogga weyn ee nidaamka file taasi waxay u taallaa in awoodda ay leedahay in si deg deg ah encode iyo kelmadaha file isla audio oo aan laga badinin tayada. Marka la barbar dhigo ka qaabab kale file Deji, FLAC ku faantaa ee ay decoder ool ah oo taageera kelmadaha of audio asalka aan laga badinin tayada.
2. Sidee u ciyaaro FLAC on Windows iyo Mac?
Waxaad ka ciyaari kara FLAC ku saabsan nidaamka ka hawlgala Windows dhex Windows Media Player. Si kastaba ha ahaatee waa in aad kala soo bixi codec dibadda si ay u sameeyaan file FLAC aad la socon ciyaaryahan Windows Media. Waxa kale oo aad ka fiirsan karto beddelo qaabka aad file in qaar ka mid ah qaab kale oo caan ah si uu u ciyaaro si fudud in ciyaaryahan kasta.
Haddii aad rabto in aad ka ciyaari file FLAC ku saabsan habka ka hawlgala Mac, ka dibna waxaa jira dhowr ciyaaryahan warbaahinta sida ciyaaryahan Vox taageera qaab file FLAC. Si kastaba ha ahaatee waxaad ku beddelan kartaa qaabka file FLAC in ay qaab kale oo caan ah oo file kasta oo ka dibna u ciyaaro ciyaaryahan warbaahinta.
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan FLAC in MP4 on Windows iyo Mac